“Hernandez wuxuu igula taliyay inaan u dhaqaaqo kooxdan” – Mbappé - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
“Hernandez wuxuu igula taliyay inaan u dhaqaaqo kooxdan” – Mbappé
June 8, 2021 at 18:45 “Hernandez wuxuu igula taliyay inaan u dhaqaaqo kooxdan” – Mbappé2021-06-08T18:45:50+02:00 CAYAARAHA
(Paris) 08 Juun 2021. Weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ayaa sheegay in saaxiibkiis xulka qaranka Faransiiska Lucas Hernandez uu kula taliyay inuu u dhaqaaqo naadiga Bayern Munich mustaqbalka dhow.
Qandaraaska Kylian Mbappé ee Paris Saint-Germain wuxuu dhacayaa xagaaga 2022, waxaana lala xiriiriyay mudadii ugu dambeysay inuu u dhaqaaqayo kooxo dhowr ah oo ay ugu horeeyaan Real Madrid, Liverpool iyo Bayern Munich.
Haddaba Kylian Mbappé oo la hadlay warbaahinta ayaa wuxuu yiri:
“Lucas Hernandez wuxuu ii sheegay inaan kula biiro Jarmalka si aan ugu ciyaaro Bayern Munich, Kubadda cagta ma ogaan doontid waxa dhici doona, laakiin xilligan aad ayaan ugu faraxsanahay xaaladdayda iyo joogitaankeyga Paris.”
“Bayern Munich waa mid ka mid ah shanta naadi ee adduunka ugu fiican, waxaad kaliya ugu hambalyeyn kartaa iyaga inay ilaalinayaan tayada kooxda sanad walba, iyaga unbaa garanaya waxay samaynayaan.”
“Jérôme Boateng iyo David Alaba way baxeen laakiin waxay la soo wareegeen Dayot Upamecano, kaasoo ah daafac aad u fiican.”
“Waxaan ahay taageere kooxdan, waxay leeyihiin fikrad cad oo ka dhigaysa iyaga koox weyn, marwalba waa kuwa ugu cadcad koob kasta, sidaas darteed haddii aan doonayo inaan ku guuleysto tartan, waa inaan garaacaa Bayern Munich.”
« The Mayor they deserve (Kaiser Omar)
Dacwad ka dhan ah Farmaajo oo la diyaarinayo kadib markii QM ay xaqiijisay in askar Soomaali ah la geeyey Tigray »